Nchọpụta dị elu maka ndị na-ere ahịa Email | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 2, 2015 Tọzdee, Septemba 1, 2016 Douglas Karr
Anyị dere banyere 250ok n'oge gara aga ma ha na-aga n'ihu ịkwalite onyinye mgbapụta ha. Imirikiti ndị na-ere ahịa email anaghị ama na ha nwere ike ịnwe oke pasent nyefere, mana email ha nwere ike ịrapara na nzacha SPAM. Nzipu pụtara na e nyefere ozi… ọ bụghị na o mere igbe mbata. Ọ bụ ezie na azịza ndị ọzọ dị na mbara igwe a dị oke ọnụ, 250ok bụ ihe ngwọta dị ọnụ nke ahụ na - enye ike karịa - ma ọkwa taa banyere aha ịre ahịa email ha na - ewere ya ọzọ!
Informant na-aza aha gị na-enye ọhụhụ na nghọta ịchọrọ iji chọpụta nzipu ozi nhịahụ gafere iyi iyi ozi gị na mpụga yana ozi ohi phishing ma ọ bụ izipu akwụkwọ na-enwetaghị ikike nke nwere ike imebi akara gị. A zuru okè otito anyị igbe mbata na blacklist nlekota ngwaọrụ, Informant Reutant na-enyocha adreesị IP gị na ngalaba ma nye nkọwa ndị dị mkpa iji dozie ihe mgbe nsogbu bilitere.
250ok bụ onye mmekọ anyị - anyị ji ha nyochaa nke anyị aha email - na atụmatụ ọhụrụ a na-enye ndị na-ere ahịa email ngwá ọrụ njikwa aha abụọ pụrụ iche - ikike inyocha akara ha maka izipu ozi adịgboroja na ọnyà spam.
Chedo ụdị gị site na Phishing, Spamming na Spoofing
250ok Reut Informant na-enye ndị na-ere ahịa email na ndị na-enye ọrụ email ozi ọma ka ha nyochaa ngalaba ha maka ozi email ezighi ezi ma ọ bụ mbọ phishing. Kọ akụkọ na-enye gị ohere ịhụ ebe ozi adịgboroja na-abịa - nke IP na mba mebiri. Nwere ike ịlele njikọ njikọ wee hụ ebe ndị spammers na-anwa ịba ndị ahịa gị.
Chedo gị Brand si Email Spam Afia
Debe ndị ahịa email gị depụtara ha na adreesị ozi-e ndị agbakwunyere iji tinye ọnyà gị ma mee ka ị banye na ọnyà SPAM nke na-eweta nnweta ma ọ bụ na-egbochi ndị na-eweta ọrụ Internetntanetị kpamkpam. Ihe ngosi 250ok na-enye ndị ahịa email ohere inweta nghọta dị oke mkpa na ọrụ ozi ha na-apụ apụ ma chọpụta nsogbu ndị na-emetụta aha ha.
Nwere ike inyocha email gị anatara na-adị mfe ịhụ nke IP, adreesị ozi-e, na ngalaba na-eziga ozi ọjọọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eweta ọrụ Email, ị nwekwara ike ịhụ ma ndị ahịa gị nwere nkwenye kwesịrị ekwesị (DKIM, SPF records). Niile nke aha data nwere ike exported ala ka onye ozi.
Ọ bụrụ na ị na-eziga ọtụtụ narị puku ozi ịntanetị kwa ọnwa, ị nwere ike ịhapụ ọtụtụ ego na tebụl site na ị gaghị enyocha aha email gị. Banye maka a ngosi nke 250ok taa!
Tags: 250okaha emailnjikwa aha njirimara emailphishingnlekota oru phishingspamọnyà spam